R W Cabdiweli: Weerarka Golaha Shacabku nagama leexinayo ugaarsiga Alshaabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cabdiwali Sheikh Axmed ayaa sheegay in weerarkii manta Alshabaab ku qaadday xarrunta golaha shacabka uusan dowladda Soomaaliya ka leexin doonin ugaarsiga Alshabaab oo weerarkaas fuliyey.
“Weerarkan iyo ismiidaaminta ay wadaan nabad-diidku kama joojinayaan Xukuumadda Federaalka inay sii waddo ugaarsiga argagixisada iyo inay ka horjoogsato xumaanta ay damacsan yihiin.” Ayuu yiri Raysul wasaare C/weli Sheekh Axmed.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa sheegay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa AMISOM si degdeg ah uga jawaabeen weerarka ka dhacay xarunta Baarlamaanka, wuxuuna sheegay in dhammaan xubnaha Baarlamaanka la xaqiijiyay halka ay ku sugan yihiin.
“Ciidamada amnigu waxay muujiyeen iska caabin xoog leh, waxaana ay wali ka shaqeeynayaan inay sugaan amniga aagga” ayuu sidoo kale yiri C/weli Sheekh oo ciidamada xooga dalka ku wargeliyey iney tilaabo ka qaadaan Alshabaab.
Ra’iisul Wasaaruhu oo ku sugnaa Wasaaradda Gaashaandhigga markii weerarka ismiidaaminta ah lagu qaaday xarunta Baarlamaanka ayaa markaas kadib kulan amaanka lagu xoojinayo la galay madaxda sare ee hay’adaha amniga.
Ugu dambeyntii R/wasaare C/weli Sheekh ayaa u tacsiyeey dadkii ehelladoogu ku geeriyoodeen weerarka “Anigoo ku hadlaya magaceeyga, kan Madaxweynaha iyo dhammaan xubnaha Baarlamaanka, waxaan tacsi tiiraanyo leh u dirayaa dadkii ku geeriyooday weerarkii maanta. Waxaan sidoo kale Ilaahay uga baryaynaa inuu siiyo caafimaad taam ah dadkii ku dhaawacmay”.
Daawo sawirrada xarrunta baarlamanka Soomaaliya ee la weeraray